खुशी लुटिएपछिको दसैं
दिनेश गौतम काठमाडाैं, १८ असाेज
दसैंको आगमनसँगै गाउँबस्तीमा चहलपहल बढेको छ । ओहोरदोहोर गर्नेको लर्को लागेको छ । मुग्लानमा रहेका दाजुभाइ–दिदीबहिनी स्वदेश फर्किएका छन् । काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाउनेहरू जन्मघर पुगिसकेका छन् ।
पाखापखेरीमा सयपत्री र मखमली फूल ढकमक्क फुलेका छन् । बडादसैं सबैको घरआँगनमा भित्रिइसकेको छ । वर्षौंपछि घरपरिवार, आफन्त, इष्टमित्र, साथीसंगीसँग भेट्न पाएकोमा सबै मख्ख छन् । उत्साह, उमंग र खुशीले डेरा जमाएको छ । पर्वले के बालक के वृद्ध, सबैलाई छपक्कै छोपेको छ ।
तर, यस्तो ठाउँ पनि छ, जहाँ दसैंको रौनक खासै छैन । छ त केवल अतितका सम्झनाका पोकाहरू । हो, सधैं चहलपहल र मानिसको खचाखच हुने पशुपति क्षेत्र केही दिनयता सुनसान छ । बिहान र साँझ केही भक्तजन पुगे पनि दिउँसोको समयमा पशुपति क्षेत्रमा सन्नाटा छाउँछ ।
समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रम पशुपतिभित्र भेटिइन्, काभ्रेको पाँचखालकी ७५ वर्षीया पार्वती सापकोटा । हामी पुग्दा उनी बत्ती काट्दै थिइन् । आँखाले धमिलो देखे पनि उनको हात फटाफट चलिरहेको थियो । हामीले उनीसँग कुरा गर्ने जमर्को गर्यौं र नजिक गयौं ।
‘सञ्चै हुनुहुन्छ आमा ?,’ सोधें ।
‘बाँचिएको छ !,’ उनले झर्को मान्दै भनिन् ।
यस्ता प्रश्न गर्ने त दिनमै कति आउँछन्–आउँछन् । जसले खोजी गरोस् भन्ने लाग्छ, उसको अत्तोपत्तो हुँदैन, जसलाई चिनेकै छैन ऊ ‘के छ हालचाल ?’ भन्दै नजिक आउँछ । शायद पार्वतीलाई पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ ।
उनीसँग विस्तारै खुलेर कुरा गर्दै गयौं । आश्रममा बस्न कसको रहर हुन्छ र ? बाध्यता, परिस्थिति र नियतिले उनलाई दुई वर्षअघि आश्रममा ल्यायो । श्रीमानको निधन भएपछि एक्ली भइन् पार्वती ।
‘खै बाबु ! आफूलाई भाग्यमानी भनौं कि अभागी, सन्तान जन्मिएनन् । श्रीमानको निधन भएपछि घरपरिवारबाट अपहेलित हुनुपर्यो, आफ्नो सन्तान नभएपछि हेर्ने कोही भएन, कचकच सुन्न नसकेर आश्रममा आएँ,’ भक्कानिँदै पार्वतीले भनिन्, ‘आखिर सन्तान हुने पनि यही आश्रममा आएका छन् ।’
‘सन्तान भए पनि पीर नभए पनि पीर’ यति भन्दै पार्वती केही बेर मौन रहिन् । जीवनभर सँगै जिउने कसम खाएका श्रीमान् नारायणप्रसाद परलोक भएपछि एक्ली भएकी पार्वती आफूजस्तै च्यातिएका मन लिएर आश्रममा रहेका दौंतरीसँग दसैं मनाउने योजनामा छिन् ।
‘दसैं’ शब्द सुन्नेबित्तिकै उनी चुप बसिन् । विगतको यादले हुन सक्छ, उनका आँखा आँशुले टम्म भरिए । काठमाडौैंबाट नजिकै भए पनि उनलाई काभ्रे फर्कने मन छैन । भन्छिन्, ‘अब जति बाँचिन्छ, यहीँ बसेर बाँच्ने हो ।’ पवित्रस्थल पशुपतिमै अन्तिम सास फेर्ने उनको अन्तिम इच्छा छ ।
सबै ठीकठाक रहन्थ्यो र आफूले सोचेको जस्तो हुन्थ्यो भने ओखलढुंगाकी विद्या दाहाल पनि यतिबेला परिवारसँग दसैं मनाइरहेकी हुन्थिन् ।
विडम्बना, सोचेजसरी कहाँ चल्छ र जीवन ? समयले जता डोर्यायो, त्यतै पानीझैं बग्नुपर्ने मान्छेको चोला । उनको पनि परिवार नभएको होइन, ६३ वर्ष पुगेकी विद्यालाई घरपरिवारको यादले विछट्टै सताउँछ । तर, परिवारलाई बिर्सन पनि सकेकी छैनन्, सम्झन पनि चाहन्नन् ।
भोलासँग १६ वर्षको उमेरमा उनको विवाह भयो । विवाहपछि एउटी छोरी पनि जन्मिइन् । त्यसपछि झोला बोकेर भोला कमाउन लाउर निस्के । तर, कहिल्यै फर्किएनन् । उतै कान्छी बिहे गरेर बसे ।
छोरी पनि सानै उमेरमा हिँडी । त्यसपछि एक्ली भएकी विद्यालाई न घरपरिवार न समाजले नै राम्रो दृष्टिले हेर्न थाल्यो । उनलाई त्यो समाजमा बोझ भएर बस्न मन लागेन र पशुपति आश्रममा आइपुगिन् ।
दसैंले गउँघरको सम्झना लिएर आउँछ तर जाने हिम्मत उनमा छैन । ‘आफन्त भएर के गर्नु ? राम्रो गरेको भए को आउँथ्यो यहाँ ? परिवारसँगै दसैं मनाइहाल्थें नि,’ मन अमिलो बनाउँदै उनले भनिन् । विद्या पाँचौं दसैं आश्रममा मनाउँदैछिन् ।
हिजोको जस्तो बागमती कहाँ छ र ? कञ्चन बागमती आज धमिलो भएको छ । धमिलो भएर बग्नु बागमतीको रहर होइन, बाध्यता हो । बागमतीजस्तै धमिलो भएको छ, आजका मान्छेको सोच । त्यही सोचका कारण अधिकांश आमाबाबु आश्रममा बस्न बाध्य छन् ।
काभ्रे रोशीका गोपाल खत्रीको पनि व्यथा उस्तै छ । उमेरले ६९ पुगे । छाला चाउरी परेको छ । शरीरमा बल छैन, थरथर काम्छ शरीर । हिँड्न सक्दैनन् । तर, मन अझै पनि बलियो छ उनको ।
जन्मिदा उनी राम्रै जन्मिए । तर, तीन वर्षको उमेरमा उनलाई रोगले चाप्यो । आजको जस्तो उपचारको व्यवस्था थिएन । गाउँघरमा आमाबुबाले सक्दो नगरेको पनि होइन । उनलाई रोगले शारीरिक रूपमा अशक्त बनायो । दुवै खुट्टाले काम गरेनन् । आमाबुबा बाचुन्जेल त उनले खासै असहज महसुस गर्नु परेन । तर, आमाबुबाको शेषपछि भने उनी एक्लो भए । परिवारका अन्य सदस्यले उनलाई सहन सकेनन् । अरुको घृणाको पात्र बनेर बस्नुभन्दा जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भन्दै गोपालले बाटो तताए । अन्ततः उनी आइपुगे आश्रममा । आज उनी आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्छन् । मनमा अनेक पीडा भए पनि बाहिर भने दसैंको चङ्गाझैं देखिएका छन् गोपाल ।
मान्छे खुशी हुन भगवानलाई दूध चढाउँछन् । तर, नौ महिना कोखमा राखेर वर्षौं दूध खुवाएकी आमासँग तिनै सन्तान खुशी छैनन् । सन्तानको भविष्यका लागि पसिना बगाउने पौरखी बुबासँग तिनै सन्तान सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले त ती ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रमले कुरेर बसेको हुन्छ ।
शंकर कारञ्जितको उमेर ८७ पुग्यो । सबैको सपनाको शहर काठमाडौंमै जन्मिए । घरबार पनि नभएको होइन उनको । उनका छोरा चाबहिलमै बस्छन् । तर, श्रीमतीको मृत्यु भएपछि उनी आश्रमको सहारा लिन बाध्य भए । पशुपतिको बाटो हुँदै गाडीमा छोरो ओहोरदोहोर गरेको देख्छन् तर उनले बोलाएको उनकै छोराले सुन्दैनन् । कहिलेकाहीँ छोरा भेट्न जान्छन् तर त्यतिले किन पुग्थ्यो र ?
मनमा अनेकन चोट भए पनि बाहिर उनले हाँस्न छोडेका छैनन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका शंकरको साथी चुरोट बनेको छ । ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने थाहा छ तर मन मान्दैन,’ फिस्स हाँस्दै भन्छन्, ‘डराउनलाई अब कति नै बाँचिएला र ?’ उनलाई पाउनु र गुमाउनु अब केही छैन । उनले आश्रममा दसैं मनाउन थालेको वर्षौं भयो । खासै योजना पनि केही छैन । ‘सबै मिलेर सामूहिक टीका लगाउने गरेका छौं,’ उनले भने ।
‘शरीरले काम गर्दा सबैले माया गर्छन् । जब छाला चाउरी पर्न थाल्छ, तब आफ्नै सन्तानले पनि टेडो आँखाले हेर्न थाल्छन् । जन्म दिने आमाबुबालाई वृद्धाश्रममा राखेर तिनै सन्तानले आफ्ना छोराछोरीलाई भन्छन्– मेरो देवता, मेरो भविष्यको सहारा ।’
एउटै खोलाको पानी खाएका चन्द्रदत्त र पुण्यबहादुर थापा चिया पिउँदै भलाकुसरी गर्दै थिए । केही बेर उनीहरूका कुरा सुनेर बस्यौं । चाखलाग्दा थिए ऊ बेलाका उनीहरूको कुरा । चन्द्रको घर रसुवा, पुण्यको घर नुवाकोट ।
चन्द्रमा जस्तै थिए चन्द्र । फरक यति हो– चन्द्रमाले अरूलाई प्रकाश दिन्छ, चन्द्र आफूलाई अँध्यारो महसुस गर्छन् । २२ वर्षको उमेरमा घर–परिवारले जबर्जस्ती ७ वर्षकी बालिकासँग बिहे गराइदिए ।
आफूभन्दा १५ वर्ष सानी बालिकासँग बिहे गरिदिएपछि उनी बिहेको भोलिपल्टै घरबाट निस्किए । त्यसपछि उनी कहिल्यै घर फर्किएनन् । छोरी उमेरको केटीसँग परिवारले विवाह गरिदिएपछि निराश भएका चन्द्रले अर्को बिहे गर्ने आँट पनि गरेनन् । सकिन्जेल त विभिन्न ठाउँमा काम गरे । जब शरीर कमजोर भयो, तब उनी आश्रममा आइपुगे । बिहेले बदलिएको उनको जिन्दगी । दोष आफ्नै भाग्यलाई दिन्छन् ।
पुण्यको व्यथा पनि कम छैन । घर पनि बसाले । दुई छोरा पनि जन्मिए । विडम्बना, जेठो छोरा ९ वर्षको भएपछि यो धर्तीबाट बिदा भए । कान्छोले तातेताते भन्न नपाउँदै आँखा चिम्लियो । भविष्यका सहाराले आफूभन्दा पहिले नै सांसर छाडेपछि कुन आमाबुबाको मन नदुख्ला र ?
दुई छोरा गुमाएको पीडाले श्रीमतीले पनि संसार छोडिन् । दाइभाइ नभएको पनि होइन, सबै आ–आफ्नो घरजम गरेर बसेपछि पुण्यलाई सहारा दिन कोही भएनन् । त्यसपछि एक्लो भए र सहारा खोज्दै आश्रममा आएपुगे ।
यी केही प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । आश्रममा रहेका एक सय ७० जनाको आ–आफ्नै कथाव्यथा छ । आश्रममा बसेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि दसैं पीडा बनेर आएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक इतिहासका साक्षी हुन् । उनीहरू पाठशाला हुन् । ज्ञानको भण्डार हुन् । हामी धेरै कुरा उनीहरूबाट सिक्न सक्छौं । सभ्य समाज निर्माणका लागि ज्येष्ठ नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, आधुनिकतासँगै ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित हुँदै गएका छन् । परिवार, समाज र राष्ट्रले ज्येष्ठ नागरिकको औचित्य महसुस गर्न सकेको छैन ।
‘उहिलेका कुरा खुइले’ भन्न थालेका छन् । समयसँगै परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो । तर, इतिहासलाई मेटेर नयाँ निर्माण सम्भव छैन । ज्येष्ठ नागरिक बोझ होइन, ओज हुन् ।
मानिस जन्मन्छ, हुर्कन्छ, शिशु अवस्था, बालक, युवा हुँदै वयस्क अनि वृद्ध हुन्छ । र, एक दिन यो संसारबाट बिदा लिन्छ, यो शाश्वत् हो । सांसारिक नियम नै हो जन्मेर एक दिन मर्ने । यसलाई न कसैले रोक्न सक्छ न त छेक्न नै । भोलि आफ्नो पनि बाटो त्यही हो भनेर युवापुस्ताले बुझ्न जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई घृणा होइन, माया, ममता र सत्कार गरौं ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १८, २०७६, ०६:४५:००
प्रेममा पाएकाे धाेकाले लिएकाे थियाे जिया खानकाे ज्यान
मेकअप अब सोखभन्दा पनि अनिवार्य बनेको छ : मेकअप आर्टिस्ट सुनकुमार
मेसिन अभावमा टेकु ल्याबमा परीक्षणको पालो कुर्दै ३ हजार स्वाब
निजी विद्यालयलाई सरकारी साथ, सामुदायिकमा संक्रमितको बास !
कोरोनाभन्दा डेंगी खतरा, सरकार अझै लकडाउन रटानमा
आइसोलेसनमा पनि रोकिएन पत्रकारको कलम
जाराको मृत्युले जन्माएको ‘स्नेहाज केयर’